Catering Cup: fihaonana tamin' ireo mpifanina malagasy: Rocco ANDRIAMIARISATRANA, Herilalaina RAVELOMANANA, Stephanie ANDRIAMAMPANDRY
www.madaplus.info by Ndrenja Randrian
Nandritra ny Catering Cup tao Lyon ny 23/24 janoary lasa teo, zay nahitana ny mpifaninana malagasy: "Chef" Herilalaina RAVELOMANANA sy "Chef" Stephanie ANDRIAMAMPANDRY ary ny "coach/juré" Rocco ANDRIAMIARISATRANA dia nanaraka teny ny solontena ny Madaplus.info. Nandritra io fotoana io dia nisy ny fionana niaraka t@ Rocco ANDRIAMIARISATRANA izy no nitondra fanazavana maromaro ho antsika momba ny fiomanana t@ ity Catering Cup ity.
Miarahaba an'i Rocco ANDRIAMIARISATRANA ny Madaplus.info.
MADAPLUS : Azonao lazaina fohifohy ny momban’ny mpifaninana malagasy ?
Telo izahay no ao anatin’i Equipe (Chef Herilalaina RAVELOMANANA izay mitana ny toerana Chef d'equipe, Chef Stephanie ANDRIAMAMPANDRY mitana ny toerana Co-equipier na mpanampy. ary ny tenako Rocco ANDRIAMIARISATRANA mitana ny toerana "Coach & Juré" - ary Izy mianadahy ireo dia efa matianina tanteraka amin’ny resaka fanaovantsakafo.
Ny tenako moa izany araka ilay voalaza teo dia Coach no sady membre an’Jury mandritra ity hetsika ity.
Ity fifaninana hatrehanay ity moa izany dia "INTERNATIONAL CATERING CUP" na ilay ahalalan-tsika malagasy maro azy "Meilleur Traiteur"
MADAPLUS : Inona no tena andraikitrao amin’izany hoe "coach/juré » zany ?
Ny Tena andraikitro moa araka ny maha-coach ahy dia "entraineur" araka ny efa ahalalan-tsika azy mahazatra : manome torohevitra, mijery ny planning sy ny Timing. Tsy dia tena ao anatin’ny fanomanana ilay menu aho kanefa ny andraikitra hafa tena lehibe iandreketako tdia ny resaka « logistique », izaho no mikaraka ny fitaovana, fitanterana, froid, deplacement, communication sy sns. Satria izy mianadahy dia tena tokony hifantoka tanteraka amin’ny fifaninanana. Mifameno tanteraka ny andraikitry ny tsirairay avy. Ary ny tenako dia miandraikitra ireo zavatra maro ivelan'ny fanomanana sakafo (ary mazava ho azy mpanandrana sakafo koa andraikitro na tany ampamerenana na ao amin'ny fotoanan'ny fifaninana - tsiky -)
MADAPLUS : Nanao ahoana ny fanomanana (tany antanindrazana sy taty ampita) ?
Teo amin’ny efa-bolana teo izahay no tena nanomana ity fifaninanana ity, ary tena mitovy amin’ireny fiomanana ataon'ny mpanao fanantanjahantena olympique ireny. Ary izahay tonga taty dia mbola tsy nijanona fa mbola nanohy foana, alohan’ny nahatongavana teto Lyon izahay dia nanao famerenana tany Nîmes. Tena tery dia tery tokoa ny fotoana hatramin’ny andro anio satria androany maraina (zoma) dia efa tamin’ny 6 maraina dia efa niomana, ary rahampitso dia tsy maintsy efa tonga eto indray amin’ny 5 ora maraina. Fa izany rehetra izany dia efa niomananay daholo ary nanaovanay fanazarana mihintsy (entrainement).
Ny andro zoma dia natao hanomanana ny menu rehetra (préparation en laboratoire) izay atao aty amin'ny Lycée Francois Rabelais (Dardilly - Lyon) ary asabotsy kosa no manao ny installation eny amin’ny Euroexpo (Lyon) toerana hanaovana ny fifaninanana (Salon de Sirha).
MADAPLUS : Ahoana ny fandraisana nataon’ny mpikarakara ?
Teo amin’ny fandraisana nataon’ny mpikara taty Lyon dia tena tsara dia tsara, ary tena hita fa tena efa lasa lavitra tanteraka ny mpikarakara amin’ny resaka « organisation ». Satria hananany ny fahaizamanao, hananany koa ny vola ahafahany mikarakara izany. Araka ny nolazaindry zareo taminay dia hisy fiovana sy fivoarana kely ny fifaninana (nitombo ny loka azon'ireo maharesy miohatra ny taona teo aloha, hisy taranja vaovao hifaninanan'ny mpifaninana : Meilleure dégustation "Poisson", Meilleure dégustation "Cochon", Meilleur Buffet traiteur, ankoatran'reo prix telo efa nisy hatramin'ny niantombohan'ny ICC
MADAPLUS : Teo amin’ny fanohanana (ara-bola sy zavatra hafa) ? nanao ahoana ny momba an’izay ?
Teo amin’ny resaka fanampiana azonay nanomanana ity fifaninanana ity dia, maro tokoa ireo orinasa sy olontsotra no nanome tanana anay (tsy ho tonony tsirairay fa sao misy adino) - fa kosa ireto misoratra amin’ny akanjonay reto daholo izy rehetra. Tena isaorana be dia be tokoa ny tsirairay avy, na ny tany an-toerana na ny taty ivelany, ary indrindra dia fisaorana no atolotra ny Filohampirenena Hery Rajaonarimampianina satria izy dia nanome anay fanampiana (ara-bola) avy amin’ny anaran’ny tenany manokana : mino izahay fa nataon’ireo mpanohana ireo izany satria tena fantany fa tena tokony hanana toerana ambony ny Gastronomie malagasy. Fa mamela ahy kosa hiteny fa teo amin’ny fitondram-panjakana (ministère sy ny ambaratonga isantsokajiny) dia tsy nahazahoanay valiny ary fanohanana mihintsy, nefa raha alaina amin’ny fo tsy miangatra dia zavadehibe izany fifaninanana erantany ho an’ny sakafo izany, ary fomba ampisehoana an’i Madagasikara, ary ny anarana entinay alohan’ny tenanay manokana dia ny tanindrazantsika « MADAGASIKARA ». Ny budget teo ampelatananay nahafahana nanomana izao fifaninana izao dia tsy ampahadimin’ny mpifaninana aminay akory, nefa confiant zahay, mino fa tsy maintsy mba hitondra vokatra na tsy ny volamena aza.
MADAPLUS : Inona no produit malagasy nentinareo atao ao anatin’ny malagasy ?
Eo amin’ny resaka produit nampiasaina dia tsy afaka nitondra ny produits avy any antanindrazana isika fa efa voapetraka sy mitovy daholo ny ho ampiasain’ny mpifaninana rehetra, ary mitovy ny menu ho atao napetraka hifaninanana (Carbillaud, noix de saint Jacques, cochon, chocolat, …) - Indro omeko anareo ny plaquette misy ny menu hanaovana ilay fifaninanana :
Pâtés en croûte 100% canard et chutney à base de fruits exotiques (entrée), Truites entières farcies au cabillaud et Saint-Jacques et sa sauce emulsionnée froide (entrée poisson froid), 3 interprétations libres autour du cochon (plat chaud), Chocolat noir, ananas Victoria, noix de coco et citron vert (Dessert)
MADAPLUS : Ahoana no tokin’aina amin’ny fifaninanana ? Inona no tena hitanareo fa mety ahazahoan’ny mpifaninana malagasy salan’isa tsara ?
Tsy afeninana fa mpifaninana avo lenta daholo ireo mpifaninana aminay reo, ary tena kely dia kely angamba no elanelana eo amin'ny salan'isa, ary mino aho fa mety hanano sarotra anay mpitsara. Toy ny mpifaninana rehetra dia na dia mitana ny toerana mpitsara aza ny tenako (tsy afaka manome isa ho an’ny mpifaninana malagasy fa kosa ho an’ny firenena roa ambinifolo ambiny ihany), dia mba manantena kosa eh. Ary mino aho fa mba hitarika ireo zandry ao aoriana izao zavatra izao. Satria ny Gastronomie Malagasy dia tokony taranja iray ahafahantsika mampisongadina ny Malagasy, mba misy zavatra tsara fa tsy hoe ny ratsy foana. Ny fiezahana sy ny ezaka rehetra natao nandritra izay efa-bolana izay dia mino kosa sy manantena fa mba misy vokatra ho entina mody any antanindrazana. Tsy misy meny hoe manavanana kokoa ny malagasy satria reo menu rehetra ireo dia voafehin’i Sefo Lalaina sy Stephanie daholo, ary tsy misy latsa-danja, ary araka ilay efa nolazaiko anao teo dia efa fotoana ela no niomanana mazava ho azy ho tsara daholo ny rehetra.
Misaotra an’i Rocco ny Madaplus.info nahafohy fotoana, ary mirary soa anareo ho an’ny tohin’ny fifaninanana.
Somary nanano sarotra ny nahazahoana niresaka tamin’i Chef Lalaina ny Zoma satria tena sahirana tanteraka izy, ary tsy nanana fotoana na dia kely aza nahafahana miresaka sy nitafatafa.
Ny asabotsy dia maro tokoa ny mpiray tanindrazana tonga teny antoerana, tsy avy eto Lyon ihany anefa izany olona tonga fa misy avy any Paris, Grenoble, Strasbourg ..., ary tena nanome hery ho an’ireo mpifaninana, gaga ireo vahiny nahita antsika malagasy marobe, ary nanaovan’ny mpitariteny fanamarihana manomkana mihintsy ny amin’ny maha-lavitra an’i Madagasikara. Tsy latsa-danja ny mijery lalao baolina kitra ireny ny zava niseho teto amin’ny EuroExpo, ary noredonin'ny mpifaninana matetika ny hirampirenena malagasy.
Nizotra tsara ny fifaninana, tsy nisy ny olana ho an’ny equipe malagasy, tratra tsara ny fotoana tamin’ny fanomanana ny plats ary nisy fotoana aza nahafahan’izy ireo somary naka aina kely.
Azon’ny malagasy ny Prix meilleur Buffet (ary nampitolagaga ireo vahiny ny seho nataon’ireo mpifaninana malagasy).
Miarahaba anareo telo mianadahy ny amin’ny vokatry ny fifaninana. Ahoana ny fietsehempo ?
Tena faly dia faly tokoa, satria tsy mody maina fa misy valiny ny hasasarana, ary tena misaotra be dia be an’reto malagasy sy vahiny marobe tonga nanohana anay ireto, satria tena afaka ny tahotra fa tsy irery, ary tena nampientsi-po anay tokoa satria tena tsy nampoizinay. Ary tena isan'ny nitondra hery lehibe ho anay.
Tena faly dia faly zahay, tsy hoe nanantena fa kosa efa tany ampiandohana dia efa mba nanao izahay hoe tena tokony mba misy vokatra entintsika mody na dia tsy ny loka voalohany aza. Dia zao izy hitantsika izao, fa hisaorana ny mpanohana rehetra na ny teto an-toerana na ny tany antanindrazana.
Izao ilay antsoina hoe valin-kasasarana e. "Nous le méritons", raha atao amin’ny teny vahiny, fa dia misaotra ny mpanohana rehetra koa. Ary tsy tokony hijanona amin'izao fa tokony mba misy hafa ny tanora malagasy mba handray anjara amin'itony fifaninanana itony.
Misaotra manokana an'i Ndrenja Randrianjanaka
Misaotra anareo ny Madaplus.info
"Cliquez sur les photos pour voir les images de cet événement"